Ungalithumela Kanjani ifayela leRobots.txt elibuyekeziwe noma elisha | Martech Zone
I-ejensi yethu isingatha Ukubonisana kosesho lwezinto eziphilayo kubathengisi abaningana be-SaaS embonini. Iklayenti esisanda kuqala ukusebenza nalo lenze umkhuba ojwayelekile, libeka uhlelo lwalo kusizinda esingaphansi futhi lihambisa isiza salo sezincwajana kusizinda esiyinhloko. Lokhu kuwumkhuba ojwayelekile ngoba unika amandla ithimba lakho lokukhiqiza nethimba lakho lokumaketha ukwenza izibuyekezo njengoba kudingeka ngaphandle kokuncika kokunye.
Njengesinyathelo sokuqala ekuhlaziyeni impilo yabo yokusesha, sibhalise izizinda kanye nezizinda zohlelo lokusebenza kuma-Webmasters. Yilapho lapho sathola khona inkinga esheshayo. Wonke amakhasi wohlelo lokusebenza ayevinjelwe ekukhonjisweni yizinjini zokusesha. Sizulazule ekufakweni kwabo kwe-robots.txt kuma-Webmasters futhi sayibona ngokushesha inkinga.
Ngenkathi belungiselela ukuthuthela kwelinye izwe, iqembu labo lokuthuthuka belingafuni ukuthi isizinda sesicelo sikhonjwe ngosesho, ngakho-ke abavumanga ukufinyelela ezinjinini zokusesha. Ifayela le-robots.txt yifayela elitholakala empandeni yesiza sakho - yourdomain.com/robots.txt - lokho kuvumela injini yokusesha yazi ukuthi kufanele yini bakhase isayithi noma cha. Ungabhala imithetho yokuvumela noma ukungavumeli inkomba kuyo yonke indawo noma izindlela ezithile. Ungangeza futhi umugqa ukuze ucacise ifayela lakho lemephu yesayithi.
The robots.txt ifayela belinokufakwa okulandelayo okuvimbele isayithi ukuthi likhase futhi likhonjwe kwizinga lemiphumela yosesho:
Bekufanele ukuthi ibhalwe kanjena:
Umenzeli womsebenzisi: * Vumela: /
Lesi sakamuva sinikeza imvume kunoma iyiphi injini yokusesha ekhasa isiza ukuthi ingafinyelela kunoma iyiphi inkomba noma ifayela ngaphakathi kwesayithi.
Kuhle… manje njengoba robots.txt ifayela liphelele kepha iGoogle yazi kanjani futhi bazophinde balihlole nini isayithi? Yebo, ungacela ngokuphelele ukuthi iGoogle ihlole i-robots.txt yakho, kepha ayinembile kakhulu.
Hamba uye ku I-Google Search Console Search Console kuya Khasa> umhloli we-robots.txt. Uzobona okuqukethwe kwefayela elisanda kukhasa le-robots.txt ngaphakathi kweTester. Uma ungathanda ukuhambisa kabusha ifayela lakho le-robots.txt, chofoza okuthi Thumela futhi okuzivelelayo kuzoza nezinketho ezimbalwa.
Inketho yokugcina ngukuthi Cela i-Google ukuthi ibuyekeze. Chofoza inkinobho ethi Hambisa okwesibhakabhaka eduze kwaleyo nketho bese ubuyela emuva ku Khasa> umhloli we-robots.txt inketho yemenyu yokulayisha kabusha ikhasi. Manje kufanele ubone ifayela le-robots.txt elibuyekeziwe kanye nesitembu sosuku esikhombisa ukuthi liphinde lakhasa.
Uma ungayiboni inguqulo ebuyekeziwe, ungachofoza u-Thumela bese ukhetha Buka inguqulo elayishiwe ukuzulazula uye kufayela lakho langempela le-robots.txt. Amasistimu amaningi azogcina inqolobane kuleli fayela. Eqinisweni, i-IIS ikhiqiza leli fayela ngamandla ngokuya ngemithetho efakwe kusixhumi esibonakalayo somsebenzisi. Kuzofanele uvuselele imithetho futhi uvuselele inqolobane ukuze ushicilele ifayela elisha le-robots.txt.
Tags: abaphathi bewebhu be-googleamarobhothirobots.txtifayela lama-robots.txtseowebmasters